Ny fahazavan'izao tontolo izao
"Hianareo no fahazavan'izao tontolo izao.Tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra".Lioka 5:14
Miantso antsika havitrika amin'ny asa fanompoana an'Andriamanitra ny fijoroantsika amin'ny fitsipika kristianina. Ireo izay tsy mampiasa ny talentany ho an'ny fanompoana sy asan'Andriamanitra dia tsy hanana anjara miaraka amin'i Kristy amin'ny voninahiny. Tokony hazava avy amin'ny fanahy tsirairay izay iantefan'ny fahasoavan'Andriamanitra ny fahazavana. Maro ny fanahy ao anatin'ny haizina, kanefa tsy firaihana sy tsy firaharahana ary tsy fahamatorana manao ahoana no hita amin'ny maro! An'arivony no mahazo fahazavana lehibe sy tombontsoa saro-bidy tsy hita pesimpesenina, saingy tsy manao na inona na inona amin'ny fiainany na ny volany mba hanazava ny hafa. Tsy tonga saina akory amin'ny andraikiny izay miaro ny fanahiny ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra, mba tsy ho enta-mavesatra ho an'ny fiangonana. Ho vesatra sy sakana any andanitra izy ireo. Noho ny amin'i Kristy sy ny amin'ny fahamarinana ary ho azy ireo, dia tokony hifoha sy hiasa fatratra izy ireo ho an'ny mandrakizay. Nomanina ho an'ireo rehetra izay mahafeno ireo fepetra raketin'ny Tenin' Andriamanitra ny fitoerana any an-danitra.
Ho tombontsoan' ireo fanahy nanoloran'i Kristy ny ainy, izay ao anatin'ny haizin'ny hevi-diso, dia ampirisihina ireo mpanara-dia marina an'i Kristy mba ho fahazavan'izao tontolo izao. Efa nanao ny anjarany amin'ny asa lehibe Andriamanitra, ary miandry ny fiaraha-miasa avy amin'ireo mpanara-dia Azy Izy. Nambara tamin'ny fahafenoany ny drafitry ny famonjena. Natolotra ho an'izao tontolo izao ny ran'i Jesôsy Kristy, miteny amin'ny olona ny Tenin'Andriamanitra hitarika, hanitsy, hampitandrina, hanome teny fikasana ary hampahery, ary miseho ny herin'ny Fanahy Masina hanampy azy amin'ny ezaka rehetra ataony. Kanefa na eo aza izao fahazavana rehetra misy izao, dia mbola very ao anatin'ny haizina izao tontolo izao, ary tototry ny hevi-diso sy ny fahotana.
Iza no ho mpiara-miasa amin' Andriamanitra, hambabo ireo fanahy ireo amin'ny fahamarinana? Iza no hitondra ho azy ireo ny filazantsaran'ny famonjena? Tokony ho iraky ny famindrampo ireo olona izay notahin'Andriamanitra tamin'ny fahazavana sy fahamarinana. Tokony ho avy amin'ny fantson'ny lanitra no hikorianan'ny herin'izy ireo. Tokony hanao, ezaka matotra izy ireo. Tokony ho lasa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izy ireo, handà ny tenany, hanolo-tena, tahaka an'i Jesôsy Izay noho ny amintsika dia lasa ory sy nahantra, ary ny fahantrany no maha-manan-karena antsika.